Ho velomin’ny Mpanoratra antsoratra ny tantaranao
Ndao avadika boky ny tantaranao
Hatramin’ny niandohan’izao tontolo izao dia niantso mpanoratra foana ny olona sy ny fiarahamonina mba handraisana antsoratra ny taratasipanjakana na ny kolotsain’ny mponina. Rehefa nandeha ny fotoana dia lasa nivoatra ho mpanoratra hoan’ny daholo be ry zareo, tonga ho mpanoratra manokana hoan’ny manamboninahitra ambony mihintsy aza ny sasany. Niainga avy amin’ireny ny niatombohan’ny rakitsoratra izay nitoetra hatr’iza ka hatraminy izao.
Ankehitriny, nohon’ny fandrosoana amin’ny alalàn’ny ”impression numérique”, dia azon’ny tsirairay atao ny manoratra ny tantarampiainany na milaza ny heviny. Lasa mpanoratra ny mpandray antsoratra ary amin’ny alalàn ny fampiasana fomba manaraka ny toetr’andro no hanaovana an’izany. Ny Mpanoratra Tantarapiainana dia afaka mandrakotra antsoraka ny tantaran’ny fianakaviana iray manontolo. Azo avadika boky avokoa ny tantaranao na fohy na lava, ary ny tompon’ny tantara no miandraikitra ny fanatontosana izany. Azonay atao ny mitady ny mpanatota boky ho anao.
Ny Mpanoratra Fahatsiarovana dia fikambanana mpanoratra matihanina iray, mampiasa ny fahaizany erak’izao tontolo izao. Ao anatin’io fikambanana io, dia miaraka mifanakalo hevitra, mampitombo fahaizana, mizara traikefa ny Mpanoratra rehetra. Manaja tanteraka ny “charte déontologique” ny Mpanoratra tantarampiainana ary io no atao fototrin’ny asa soratra.
Ny fikambananay dia afaka manome toky ho anao sy amin’ny asa soratra izay tianao ho tanterahinay. Voninahitra ho anay nefa kosa ao anatin’ny fahaleovantena tanteraka no hanantanterahinay ny asa isaky ny firenena misy anay. Raisinay tanteraka ny andraikitra manoloana nareo ary vonona ny hanoro hevitra mahomby anareo izahay mandritran’ny fandraisana an-tsoratra.
Ny tombotsoanareo no tanjona, raha nihevitra ny hanangana ity tombojotra manerantany ny Mpanoratra Tantarapiainana ity. Nohon’io Fikambanana io dia tanteraka ny tanjon’ny Mpanoratra tantarampiainana : manaja ny kolotsaina isaky ny firenena ary mahamora no fandraiketana antsoratra ny teny amin’ny fiteny maro. Azo lazaina hoe mitady ny famerenana ny fiainan’ny mponina tao Babilaona izahay.
La mémoire est le scribe de l’âme